ပညာရှင်တွေအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ် - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ မာစတာရဲ့အစီအစဉ် ျခံဳငံုသံုးသပ္မႈ
USA တွင်ချီကာဂိုမြို့အနီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအပေါ်အချိန်ပြည့်လေ့လာမှု 8-12 လအတွင်းနှင့်အတူစတင်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတစ်လတစ်ဦးသင်တန်းအချိန်ပြည့်လေ့လာနေခံစားပါ။
အချိန်ပြည့် Paid Internship
အသေးစိတ်၏အကျဉ်းချုပ် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံအစီအစဉ် Options ကိုအတွက်က MS များအတွက်
MSCS အစီအစဉ် Option ကို
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ 8-9 လအတွင်း2နှစ် Up ကို CPT4အဝေးသင်ပညာရေးသင်တန်းများ ဖေဖော်ဝါရီလ, မေလ, သြဂုတ်လ, နိုဝင်ဘာလ $ 3000 - $ 7500
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ 9-10 လအတွင်း 11.5 လအတွင်း CPT +3တစ်နှစ် Opt option ကို3အဝေးသင်ပညာရေးသင်တန်းများ ဖေဖော်ဝါရီလ, မေလ, သြဂုတ်လ, နိုဝင်ဘာလ $13,000
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများ 12-13 လအတွင်း3တစ်နှစ် Opt option ကို optional ဖေဖော်ဝါရီလ, မေလ, သြဂုတ်လ, နိုဝင်ဘာလ $ 20,000 - $ 21,000
အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများ 12-13 လအတွင်း 8 လအတွင်း optional ကို 1 DE သင်တန်းအမှတ်စဥ် (optional) ဖေဖော်ဝါရီလ, သြဂုတ်လ $ 20,000 - $ 21,000
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအများအတွက်စံဘဏ္ဍာရေးအကူအညီအထုပ် 8 လအတွင်းအနိမ့်ကနဦးကျူရှင်ငွေပေးချေမှု, တစ်ခုတည်းကျောင်းဝင်းအိုးအိမ်, အော်ဂဲနစ်အစားအစာနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံကိုဖုံးလွှမ်း။ မြင် ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီကဏ္ဍကို.
အဆိုပါတက္ကသိုလ်အမေရိကတိုက်ရဲ့ဦးဆောင်သည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများအများအပြားနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကမည်သည့်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်သင်ကျောင်းသားတစ်ဦးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့, သင်သင့်ကိုယ်ပိုင်လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့လစာသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံးအနှစ်င်ငွေပုံမှန်အားဖြင့်ပျမ်းမျှအား $ 80,000 ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကို Microsoft က, Federal Express, IBM, အမေဇုံ, Oracle က, General Electric, Apple နဲ့ Hewlett-Packard အပါအဝင် 1000 အမေရိကန်ထက်ပိုပြီးကုမ္ပဏီများ, မှာ Intern များကိုပြုလေပြီ။
ဖြစ်နိုင်ခြေသုံးခုယခုရှိပါတယ် တက်ရောက်သူ options များ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၌အကြှနျုပျတို့၏က MS သည်။
ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်ဝင်ရောက်ကျောင်းသားများနှစ်ခုထဲကတစ်ခုအတွက်စာရင်းသွင်းပါလိမ့်မယ် entry ကိုအပုဒ်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာပမာဏပေါ် မူတည်. ။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ငွေသားအပါအဝင်အနိမ့်အတိုး, ရေရှည်ဖက်ဒရယ်ကျောင်းသားချေးငွေများ, ကိုအသုံးပြုပါ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျောင်းသားများအတွက်ကျူရှင်အောက်တိုဘာ 1000 entry ကိုနှင့်အတူစတင် $ 2018 အားဖြင့်တိုးပွားစေပါလိမ့်မယ်။
"ငါသည်လက်ရှိ Capgemini အမေရိကတိုက်မှာအကြီးတန်းဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
mum ကြှနျုပျကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့နှင့်အကြီးမားဆုံးဆော့ဖ်ဝဲကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများထဲကတစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ငါ့အသက်ကိုတကယ်ကိုပြောင်းလဲသွားသည်အစဉ်မပြတ်ငါ mum ကျေးဇူးတင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ "